Garabka mucaradka ee Gambia oo sheegay in madaxweyne Yaxya Jammeh aynan maxkamada geyn doonin marka oo xafiiska baneeyo – The Voice of Northeastern Kenya
Garabka mucaradka ee Gambia oo sheegay in madaxweyne Yaxya Jammeh aynan maxkamada geyn doonin marka oo xafiiska baneeyo
Afhayeen u hadlay garabka mucaarardka oo tageray madaxweynaha dhawaan la dooraty ee dalka Gambia Adama Barrow ayaa sheegay in madaxweyne Yaxya Jameeh oo doorshadan lagaga adkaaday aynan maxkamada la tiigsan doonin marka uu xafiiska baneeyo ka dib.
Madaxweyne Yaxya Jammeh ayaa Gambia hogaaminayay 22-kii sano ee ugu dambeysay halka uu horay u aqbalay in doorshada looga guuleystay kadib balse uu go’aankaasi ka noqday oo uu weli ku adkeysanayo in uu hogaanka dalkaasi sii hayo.
Beesha calamka ayaa ugu baaqday Yaxya jameeh in uu ogolaado in laga guuleystay oo uu xilka wareejiyo.
Afhayeenkan oo lagu magacaabo Halifa Sallah ayaa xusay inj urur goboleedka ECOWAS uu doonayo in loo cadeeyo qorshada maamulka cusub ee Adama Barrow eek u aadan in madaxweyne Jameeh dacwad lagu soo oogayo iyo in kale.
Wuxuu xusay in uusan jirin wax qorsha ah oo ku saabsan dacwad maxkmaad loo gudbiyo oo ka dhan ah madaxweynaha weli dalkaasi hogaamiyo.
Adama Barrow oo ah madaxweynaha la doortay 1-dii bishan Disembar sanada 2016-k ayaa sheegay in uu Yaxya Jameeh ula dhaqmayo sida madaxweyne hore oo uu la tashanayo.
← Ku dhawaad 30 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay suuq ku yaala dalka Mexico
Baarlamaanka oo berito fadhi kale yeelanaya kadib markii kulankii shalay la carqaladeeyay →